अर्चनाको सेक्स प्रस्तावबाट हैरान फिल्म निर्माता न्याय खोज्दै प्रहरीमा ! – YesKathmandu.com
अर्चनाको सेक्स प्रस्तावबाट हैरान फिल्म निर्माता न्याय खोज्दै प्रहरीमा !
बुधबार ०३, चैत २०७२
नाङगो फिल्म खेल्ने भए सेक्स गर्न दिन्छु नत्र दिँन्न’ भन्ने युवतीका कारण पीडितको जत्था प्रहरी कार्यालयमा ! ‘सेक्स त के हामीलाई उनीसँग केही पनि गर्नु छैन । तर उनले हामीलाई त्यस्तो भनेपछि घरवार बिग्रियो सर’ भन्दै पुगेका पीडितहरुलाई युवतीले भनिन् ‘हिम्मत भए गरेर देखाउ न पुलिसलाई रिपोर्ट गरेर के पाइन्छ ?’
रमिता हो टेकुस्थित अपराध महाशाखाको । युवतीको कुरा सुनेर ट्वाँ परेका साइवर क्राइमका इनेस्पेक्टर पशुपति राय कराए । ‘यहाँ चाहिने कुरा मात्र बोल्न पाइन्छ, ख्याल गर्नुस् हौ ।’ यस्तो रमिता चलाउने युवती हुन् युट्युव र टि वटरमा नाङा दृश्य अपलोड गरी चर्चामा आएकी अर्जना पनेरु । केही समयअघि उनले एउटा सञ्चार माध्यमलाई अन्तर्वाता दिँदै नाङगो फिल्म खेलाए यौनसम्बन्ध राख्छु, फलाने फलानोले अर्के फिल्म खेलाएर सेक्स अफर गरेको बताएकी थिइन ।
अर्चना पनेरुको सेक्स प्रस्तावले हैरान भएका फिल्म निर्माता माधव बाग्ले, चप्पली हाइटका निर्माता अर्जुन कुमार, झोलेका टेकेन खड्का न्याय माग्दै प्रहरीसमक्ष पुगेको जनआस्था साप्ताहिकमा समाचार छ ।
ल्हारक्याल लामा फरार अभियुक्ति भएको अर्काे रहस्य खुल्यो
देउवाजी झण्डा बोकेर हिड्ने नेविसंघका कार्डहोल्डर न्यायाधीश बन्न मिल्छ ?
दुई कार्यदलको बैठक बालुवाटारमा बस्दै
प्रधानसेनापतिको कीर्ते सर्टिफिकेटले सेना भित्रै हंगामा
भोलि नेविसङ्घको निर्वाचन
तीन माओवादीले छुट्टाछुट्टै रुपमा जनयुद्ध दिवस मनाउदै
अंगीकृतलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मागलाई प्रचण्डले ‘हुँदैन ’ भन्नुभएको छैन ’
७० करोड विगो भएको ५० कर्मचारीबिरुद्ध आज भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता हुँदै
विराटनगरमा कांग्रेसको अग्रता कायमै
पारवहनसहित चीनसँग १० बुँदे सम्झौता, सुख्खा बन्दरगाहदेखि चिनियाँ बैंकको शाखा विस्तारसम्म
लोकमानलाई बचाउन वकिल विरामी परे
मनमोहनलाई पछ्याउँदै ओली सरकारले आज १० खर्बको बजेट ल्याउने
राष्ट्रपति भण्डारीको भारत भ्रमण तय
दुईतिहाईको समर्थन पुर्याउन संविधान संशोधन गरी उपेन्द्रलाई सरकारमा ल्याइदै
पञ्च पाण्डव–प्रचण्डको भेटमा देउवा र पौडेलको साथ
एमालेले गर्‍यो राष्ट्रियसभा उम्मदेवारको सिफारिस
महाकालीको पानी कब्जा गर्ने प्रचण्ड सरकारलाई भारतको प्रस्ताव
देउवाको संदेश बोकी मध्यरातमा प्रचण्ड ओली भेट्न माइतिघर
नेशनल मेडिकलको सम्बन्धनविरुद्ध विवेकशील साझा पार्टी अख्तियारमा